Imibuzo ebuzwa njalo ku-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Ngezansi uzothola izimpendulo zemibuzo ejwayelekile ngokuphathelene ne-ultrasonication. Uma ungayitholi impendulo yombuzo wakho, sicela ungangabazi ukusibuza. Sizojabula ukukusiza.
Ngingakwazi yini ukunikeza i-solvents?
Ngidinga amandla angakanani ama-ultrasonic?
Ingabe i-ultrasound ithinta abantu? Yiziphi izinyathelo okufanele ngizithathe ngokusebenzisa i-ultrasonication?
Uyini umehluko phakathi kwe-magnetostrictive ne-piezoelectric transducers?
Kungani isampula ishisa phezulu ngesikhathi se-sonication?
Zikhona izincomo ezijwayelekile mayelana namasampuli wokuqhafaza?
Ingabe i-Hielscher inikeza amathiphu we-sonotrode athatha isikhundla?
Q: Ngingakwazi yini ukunikeza i-solvents?
I-solvents engakwazi ukuvuthayo ingabe ishaywa yi-sonication, ngoba izinkinga ezivuthayo noma eziqhumayo zingenziwa yi-cavitation. Ngalesi sizathu kufanele usebenzise amadivaysi e-ultrasonic nezesekeli ezifanele lolu hlobo lwe-ultrasonic application. Uma udinga i-solvents ukuze ihanjiswe, sicela Xhumana nathi, ngakho-ke singancoma izinyathelo ezifanele.
Q: Ngidinga amandla angakanani ama-ultrasonic?
Amandla adingekayo e-ultrasonic adingekayo ancike ezintweni eziningana, njenge:
ivolumu evezwe ku-sonication
ivolumu ephelele ezocutshungulwa
isikhathi sokucubungula ivolumu yenani
impahla okumele ikhuliswe ngaye
inhloso ehlosiwe imiphumela ngemuva kokwelashwa kwe-ultrasonic
Ngokuvamile ivolumu ekhudlwana idinga amandla aphezulu (ukuphuza amanzi) noma isikhathi esiningi sokunakekelwa. Eziningi zezinhlobo ze-sonotrode, amandla asakazwa ngokubanzi kuwo wonke amaphuzu. Ngakho-ke, ama-probe amancane amancane adala insimu yokugxila ngaphezulu. Ukuphakama okukhulu kwe-ultrasonic (okuvezwe emandleni ngevolumu ngalinye) kuzovame ukuholela ekusebenzeni okuphezulu kokucubungula.
Q: Ingabe i-ultrasound ithinta abantu? Yiziphi izinyathelo okufanele ngizithathe ngokusebenzisa i-ultrasonication?
Ama-ultrasonic frequencies ngokwawo angaphezu kwebanga elizwakalayo labantu. I-ultrasonic vibrations umbhangqwana kahle kakhulu ezintweni ezinamandla neziphuzo lapho zingakwazi khona ukukhiqiza i-ultrasonic cavitation. Ngenxa yalesi sizathu akufanele uthinte izingxenye ze-ultrasonically vibrating noma ufinyelele ezingxenyeni eziphathekayo. Ukudluliswa kwamagagasi e-ultrasonic angenawo umoya awunayo ithonya elibi elibhaliwe emzimbeni womuntu, njengoba amazinga okudlulisa aphansi kakhulu.
Uma sonication ephuza ukuwa kwamabhulebhu e-cavitation kudala umsindo ovulekile. Izinga lomsindo lixhomeke ezintweni eziningana, njengamandla, ukucindezela nokuphakama. Ngaphezu kwalowo mvamisa we-frequency harmonic (umvuthwandaba ophansi) ungenziwa. Umsindo ozwakalayo nemiphumela yayo kufana neminye imishini, njengezinjini, amaphampu noma ama-blower. Ngenxa yalesi sizathu sincoma ukusebenzisa ama-plugs efanele lapho sisondelene nesistimu yokusebenza isikhathi eside. Ngaphandle kwalokho, sinikeza amabhokisi okuvikela umsindo afanelekayo Amadivayisi we-Ultrasonic.
Q: Uyini umehluko phakathi kwama-transducers ama-magnetostrictive nama-piezoelectric?
Ku-transducers ye-magnetostrictive amandla kagesi asetshenziselwa ukukhiqiza i insimu ye-electro-magnetic okubangela ukuba izinto ezidumile zithuthukise. Ku-transducers yama-piezoelectric, amandla kagesi aguqulwa ngokuqondile zibe ukudlidliza kwe-longitudinal. Ngenxa yalesi sizathu, ama-transducers we-piezoelectric abe ngaphezulu ukuguqulwa komsebenzi. Lokhu kuyanciphisa izidingo zokupholisa. Namuhla, abathengisi be-piezoelectric bavame kakhulu embonini.
Q: Kungani isampula ishisa phezulu ngesikhathi se-sonication?
I-ultrasonication ithumela amandla abe yiketshezi. Ukuchithwa kwemishini, kuholele ekuqhumeni kwe-turbulences kanye nokungqubuzana ngaphakathi kwe-liquid. Ngenxa yalesi sizathu i-ultrasonication idala ukushisa okukhulu ngesikhathi sokucubungula. Ukupholisa okuphumelelayo kuyadingeka ukunciphisa ukushisa. Ukuze uthole amasampuli amancane, izikhumba noma i-glass beaker kufanele zigcinwe ebhodini lokugeza lokushisa.
Ngaphandle komthelela omubi ongase ube nomthelela wokushisa okuphezulu kuma-sampuli akho, isib. Izicubu, ukusebenza kahle kwe-cavitation kunciphisa amazinga okushisa aphezulu.
Q: Zikhona izincomo ezijwayelekile mayelana namasampuli wokuqhafaza?
Izitsha ezincane kufanele zisetshenziselwe ukwelashwa kwe-ultrasonic, ngoba ukusatshalaliswa kwamandla kuhambisana kakhulu kunabakhi bezinkulu. I-sonotrode kufanele igxilwe ngokujulile ngokwanele ngaphakathi kwetshezi ukuze igweme ukuqhuma. Izicubu ezinzima kumele zifakwe emanzini amaningi, emhlabathini noma emapulisi (isib. In nitrogen elamanzi) ngaphambi kokunikezwa kwe-sonication. Ngesikhathi i-ultrasonication yama-radicals yamahhala angakhiwa ukuthi angasabela ngendaba. Ukuxubha isisombululo sezinto ezinomsoco nge-nitrogen enomfutho noma kuhlanganise ne-scavengers, isib. I-dithiothreitol, i-cysteine ​​noma enye -SH ama-compounds abezindaba, anganciphisa umonakalo obangelwa ama-radicals ama-oxidative mahhala.
Chofoza lapha ukuze ubone izivumelwano ze-sonication I-Tissue Homogenization & lysis, ukwelapha izinhlayiya futhi izicelo ze-sonochemical.
Q: Ingabe i-Hielscher inikeza amathiphu we-sonotrode ashintshiwe?
I-Hielscher ayinikezi amathiphu athathekayo esikhundleni se-sonotrodes. Izindleko zamanzi ezincane eziphansi, ezifana nezixazululo ngokuvamile zifaka phakathi kwesikhombimsebenzisi phakathi kwe-sonotrode kanye ne-tip ephathekayo. Le nkinga ikhuphuka nge-amplitude ye-oscillation. I-liquid ingakwazi ukuthwala izingxubevange kwisigaba se-threaded. Lokhu kubangela ukugqoka emgqeni oholele ekuhlukanisweni kwethimba kusuka ku-sonotrode. Uma leli phuzu lihlukanisiwe ngeke liphinde libuyele emvamisa yokusebenza futhi idivayisi izohluleka. Ngakho-ke uHielscher unikeza ama-probes aqinile, kuphela.
Chofoza lapha ukuze uthumele imibuzo yakho!
I-generator ye-ultrasonic (ukunikezwa kwamandla) kudala ukukhipha kagesi kwamvamisa we-ultrasonic (ngenhla imvamisa ezwakalayo, isib. 19kHz). Le nandla idluliselwa ku-sonotrode.
I-sonotrode (ebizwa nangokuthi iphrobhethi noma uphondo) iyinxenye yomshini, eyathumela ukududuza kwe-ultrasonic kusuka ku-transducer kuya ekuphatheni okumele kube yindodana. Kumele ihlanganiswe ngokuqinile ukuze igweme ukuphazamiseka nokulahleka. Kuye nge-geometry ye-sonotrode, ukudlidliza kwemishini kukhuliswa noma kunciphise. Ebusweni be-sonotrode, ukudlidliza kwemishini kukhona imibhangqwana emanzini. Lokhu kubangela ukwakheka kwamabhulebhu amancane (amacu) adlulisa phakathi kwemijikelezo ephansi engcindezi futhi ahlose ngokucindezela ngesikhathi imijikelezo ephezulu yengcindezi. Lokhu kwenzeka kuthiwa yi-cavitation. cavitation ikhiqiza amabutho aphezulu e-shear enkampeni ye-sonotrode futhi ibangele ukuthi izinto ezibonakalayo zithukuthele kakhulu.
I-transducer ye-ultrasonic (i-converter) iyisakhi se-electro-mechanical, esenza ukuguqulwa kwamagesi kagesi kube ukududuza kwemishini. Ama-oscillations kagesi akhiqizwa yi-generator. Ukududuza kwemishini kudluliselwa ku-sonotrode.
Ukuphakama kwe-vibration kuchaza ubukhulu be-oscillation engxenyeni ye-sonotrode. Ngokuvamile kulinganiswa ukuphakama kwe-peak. Lona ibanga eliphakathi kwesimo samaphuzu we-sonotrode max. ukwandiswa kanye nenani eliphezulu. ukuphambana kwe-sonotrode. I-sonotrode amplitudes ejwayelekile isukela ku-20 kuya kuma-250μm.